हेटौंडा अस्पतालका २ डाक्टर क्वारेन्टाइनमा
हेटौंडा अस्पतालका २ डाक्टर क्वारेन्टाइनमा नर्स र कर्मचारीलाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी
शिलापत्र संवाददाता हेटाैंडा, १० जेठ
हेटौंडा अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी महिलामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भएपछि उनको उपचारमा संलग्न २ डाक्टर क्वारेन्टाइन बसेका छन् । हेटौंडा–४ घर भएकी ५४ वर्षीया महिला ६ दिनअघि मुटुको समस्या लिएर उपचारको लागि हेटौंडा अस्पताल आएकी थिइन् ।
तिनै महिलाकाे उपचारमा संलग्न हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सपरिटेण्डेन्ट डा. प्रवीण श्रेष्ठ र कमल दुवाडी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् ।
शुक्रबार कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि भएकी महिलालाई उनीहरूले नै स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । उनीहरूको पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गरिएको छ । रिपोर्ट आउन भने बाँकी छ ।
संक्रमित महिला अस्पतालको ज्वरो क्लिनिकमा समेत गएकी थिइन् । क्लिनिकले १ सय ४ भन्दामाथि ज्वरो देखिएमा हेटौंडास्थित आइसोलेसनमा पठाउँदै आएको छ ।
उनलाई हेटौंडा अस्पतालले रेफर गरेर काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल पठाएको थियो । परिवारसहित काठमाडौंमा उपचार गराइरहेकी संक्रमित महिलाको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेकाे जनाइएकाे छ । उनलाई उपचार गर्ने डाक्टर, सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घर परिवारको समेत पीसीआर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले डा. श्रेष्ठ र दुवाडीसहित ल्याबमा कार्यरत कर्मचारी, भिडियो एक्सरे गर्ने डाक्टर, कर्मचारी सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी दिए । रिपोर्ट नआउँदा सम्म क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको पौडेलले बताए ।
६६ जनाको स्वाब संकलन
हेटौंडा अस्पतालले करिब एक साताअघि रेफर गरेको बिमारीमा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको स्वाब परीक्षण गरिने भएको छ ।
हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार अस्पतालमा संक्रमितसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस भए/नभएको पुष्टि गर्न स्वाब परीक्षण थालिएको हो ।
अस्पतालले अहिलेसम्म १ सय ५० कर्मचारीमध्ये ६६ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि हेटौंडास्थित किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा रहेको कोरोना प्रयोगशालामा पठाएको छ । बाँकीको आजै स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउने तयारी भइरहेको पाैडेलले जानकारी दिए ।
करिब २० जना डाक्टर, नर्स तथा अन्य कर्मचारीलाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी भइरहेको हेटौंडा अस्पताल कोरोना युनिटका प्रमुख डा. हरि खड्काले बताए । बिरामीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका डाक्टर, ल्याबमा रहेका प्राविधिक, एक्स-रे गर्ने प्राविधिक, नर्ससहितका २० जना कर्मचारीलाई आइसोलेसनमा राख्न लागिएकाे हाे ।
संक्रमित महिलाको ठेगाना नै गलत
शुक्रबार कोभिड–१९ संक्रमणको पृष्टि भएकी महिलाको ठेगाना गलत रहेको खुलेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमित महिलाको ठेगाना हेटौंडा–३ भनेको थियो ।
तर, संक्रमित महिलाको घर हेटौंडा–४ हुप्रचौरमा रहेको पत्ता लगाइएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुरुषोत्तमराज सेढाईंले बताए । गलत ठेगानाका कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या परेको छ ।
संक्रमित महिला हेटौंडा अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा ठेगाना गलत भनेपछि वास्तविक ठेगाना उल्लेख नभएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि मकवानपुरका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भन्दै गलत ठेगाना उल्लेख गरेको थियो । पछि उनी मकवानपुरका नभई पर्साको रहेको खुलेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, १३:०८:००